Governance, Risk and Compliance – The Zimbabwean Insurance Industry - market research report
Governance, Risk and Compliance – The Zimbabwean Insurance Industry
Report ID: 3435683
Timetric’s 'Governance, Risk and Compliance – The Zimbabwean Insurance Industry' report is the result of extensive research into the insurance regulatory framework in Zimbabwe.
The report provides insights into the governance, risk and compliance framework pertaining to the insurance industry in Zimbabwe, including:
- An overview of the insurance regulatory framework in Zimbabwe.
- Rules and regulations pertaining to key classes of compulsory insurance, and the scope of non-admitted insurance in Zimbabwe.
- The report covers details of the insurance regulatory framework in Zimbabwe.
- Gain insights into the insurance regulatory framework in Zimbabwe.
- Track the latest regulatory changes, and expected changes impacting the Zimbabwean insurance industry.
- The Zimbabwean insurance industry is regulated by the Commissioner of Insurance, under the regulation of the Insurance and Pensions Commission, under Ministry of Finance.
- The life and non-life insurance businesses in Zimbabwe are regulated by the provisions of the Insurance Act 1987.
- The motor third-party liability insurance, National Pension Scheme (NPS) and Workers Compensation Insurance Fund Scheme (WCIF) are mandatory in Zimbabwe.
- FDI of up to 49% is permitted in the Zimbabwean insurance industry.
- Non-admitted insurers and intermediaries are not allowed in the Zimbabwean insurance industry.
2.4.2 Workmen's compensation
2.5.2 Insurance and Pensions Commission (IPEC)
Table 2: Zimbabwe - Insurance Regulatory Framework Key Features
Table 3: Zimbabwe - Life Insurance Regulatory Framework
Table 4: Zimbabwe - Property Insurance Regulatory Framework
Table 5: Zimbabwe - Motor Insurance Regulatory Framework
Table 6: Zimbabwe - Liability Insurance Regulatory Framework
Table 7: Zimbabwe - Corporate Tax Rates for the Financial Year 2016
Figure 1: Zimbabwe - Insurance Supervision and Control at Various Levels
Figure 2: Zimbabwe - Insurance Regulatory Frameworks for Company Registration and Operation